Madaxweynaha Taiwan oo ku dhawaaqay Hadal adag oo ka dhan ah Shiinaha ''
HomeWararka CaalamkaMadaxweynaha Taiwan oo ku dhawaaqay Hadal adag oo ka dhan ah Shiinaha ”
Madaxweynaha Taiwan oo ku dhawaaqay Hadal adag oo ka dhan ah Shiinaha ”
Photo/Chiang Ying-ying/ AP
Madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ayaa sheegtay in dowladeeda aysan u sujuudi doonin cadaadiska uga yimid Shiinaha ayna sii wadi doonto xoojinta difaaca jasiiradda si loo ilaaliyo hab-nololeedka dimuqraadiyadda.
Hadalka Tsai ayaa imaanaya maalin kadib markii Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu ballanqaaday inuu mar kale xaqiijin doono “dib ula midoobid nabdoon” oo lala yeesho Taiwan.
Taiwan ayaa ku andacoonaysa inay tahay dhulkeeda, Taiwan waxaa soo food saaray cadaadis milatari iyo mid siyaasadeed oo sii kordhaya si ay u aqbasho xukunka Beijing.
waxaa ka mid ah soo noqnoqoshada ciidamada cirka Shiinaha ee aagga aqoonsiga difaaca cirka ee Taiwan. Toddobaadkii koowaad ee Oktoobar oo keliya, Beijing waxay u dirtay illaa 149 diyaaradood oo milateri meel u dhow jasiiradda, taas oo ku qasabtay Taiwan inay burburiso diyaaradaheeda dagaalka waxayna dhalisay walaac caalami ah.
Isagoo ka hadlaayay isu soo bax lagu xusayay Maalinta Qaranka Taiwan oo ka dhacday bartamaha Taipei, Tsai waxay sheegtay inay rajeyneyso in la yareeyo xiisadaha ka taagan Gacanka Taiwan.